संविधान किन कमजोर ?
सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको हाम्रो संबिधान । सामाजिक न्याय समानता बिकास र समृद्धिका कैयौं बाटाहरू खोलिएको हाम्रो संबिधान । हत्या हिंसा बलात्कार आतंक भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न बनेको हाम्रो संबिधान । प्रत्येक जनताका मौलिक अधिकार र जनताका सबै खाले गुनासोहरूको संबोधन गर्न बनेको हाम्रो संबिधान र संबैधानिक राज्य ब्यवस्थामा सबैखाले गुनासो आलोचना र सुझावलाई हेर्दै समाधानको पाटो खोज्दै यस्ता समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सबै खाले समस्यालाई सहमति र समझदारीमा टुङ्याउनु पर्ने हो कि होइन ?
आज संविधान किन कमजोर भयो ? संविधान कमजोर हुँदा देश कमजोर भयो । यसको जवाफदेही संविधानका रक्षकहरूले लिनैपर्छ । कहीँ कतै कमीकमजोरी भएका छन्, ती पहिल्याएर पारदर्शी रूपमा सुधार्ने प्रयत्न हुनुपर्छ । किनकि नागरिकमा नेता खराब भए भन्ने नराम्रो छाप परिसकेको छ ।
टुङ्गो नलाग्ने कुनै त्यस्तो समस्या हुन्छ र लोकतान्त्रिक शासन ब्यबस्थामा ? हामीले सुन्दै आएका पनि छौ, आज बिश्वका कैयौं ठूला ठूला राष्ट्रका ठूला विवाद पनि लडाइ झगडाले भन्दा सहमतिमा ल्याएर टुङ्गो लगाइएका छन् ।
हाम्रो देशमा समाधान नै हुननसक्ने समस्या छन् र ? किन यो साँढे जुधाइ तरिकाका मत मतान्तरले देशलाई अस्थिर र अराजक पारिदै छ ?
हाम्रो यति सानो मुलुक सोझा जनताले सास्ती ब्यहोर्नु परिरहेको छ । अहिले मुलुकमा कतै असम्बैधानिक कदमको विरूद्धमा भन्दै आन्दोलित हुनुपर्ने त कतै संबैधानिक भएको भन्दै जिकिर गर्दै प्रस्तुत हुनुपर्ने कस्तो अचम्मको परिस्थिति हो यो ? जनताले कसको कुरा पत्याउने ? दुबिधामा छन् । जनता यस्तो अवस्था आउनु पर्ने हो र ? स्पष्ट सरल भाषामा सबै जनताले सजिलै बुझ्ने गरि लेखिएको भनेको कानुनमा जनता नै अहिले आएर अन्योलमा छन् । अहिले भैरहेको विवादका सन्दर्भलाई लिएर न्यायीक निकायहरूमा संबैधानिक कि असम्बैधानिक चर्को बहस भैरहेको छ । कहिलेसम्म यस्तो चलिरहन्छ थाहा छैन । नीति एकातिर ब्यवहार अर्कोतिर गरेर हुन्छ ? जनताको जीवन स्तर झन भन्दा झन तल तल झार्दै लाने अधिकार कस्ले कस्लाई दिएको छ ? यस्तो राजनीतिक अन्यौल जति बढायो, उति लोकतन्त्रप्रति वितिष्णा फैलिन जानेछ ।
आज देशमा यहीँ लडाइ झगडाको मौका छोपी बलात्कारी र हत्या भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्दै गैरहेको छ । दिनदहाडै श्रृंखलाबद्ध निर्मला पन्त, भागरथी भट्ट, सम्झना बिक लगायत कलिला छोरीचेलीहरूको अस्मिताहरूको निर्मम तरिकाले बलात्कार पछि हत्या भैरहेका छन् । कानुन व्यवस्था बिग्रदै गएर अराजकता फैलिउको छ । हत्यारा कहाँ छन् श्र किन अपराधी भेटिदैनन् ? नभेटिनुमा रहस्य के छ ? छोरी भएर जन्मनु साच्चै अभिषाप हो त ? कि मुलुकका कानुन फितलो भएर हो ? अपराधीलाई दण्ड दिनबाट रोक्ने शक्ति कुन हो ? किन हरेक घटनामा राजनीतिकरण गरिन्छ र अपराधी बचाइन्छ ? संविधान नै विवादमा पारेर कानुन व्यवस्थालाई फितलो पार्ने षडयन्त्र के हो ? यस प्रति जिम्मेवारहरूको ध्यान कहिले जाला ? यसरी राजनैतिक लडाइ भैरहने हो भने निर्दोषले कारूणिक नियतिको सिकार अनन्तकालसम्म भोगिरहनु पर्नेछ । भ्रष्टाचार उस्तै छ, बिकासको बाधक भ्रष्टाचार हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै तिनैले प्रस्रय पाएको अवस्था छ ? महङ्गी बढेर उस्तै छ । यी यावत कुरालाई मध्य नजर गर्दै प्रत्येक जिम्मेवार तह र तप्कामा रहेकाहरूको गहिरो ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ ।